အစိုးရမီဒီယာများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ၂၀၁၅ တွင် အပြီးလုပ်မည် | ဧရာဝတီ
အစိုးရမီဒီယာများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ၂၀၁၅ တွင် အပြီးလုပ်မည်
ဧရာဝတီ| November 9, 2012 | Hits:930
1 | | အစိုးရပိုင် မီဒီယာများဖြစ်သည့် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်သံနှင့် စာပေဗိမာန်တို့အား အများပြည်သူ ဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာများအဖြစ် ၂၀၁၃ သြဂုတ်လမှ ၂၀၁၅ သြဂုတ်လအတွင်း အပြီးပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည်ဟု ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်က ပြောသည်။ ယမန်နေ့က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသော ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန မီဒီယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စီမံချက် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်က ထိုသို့ ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
“လွှတ်တော် ဂျာနယ်” ထုတ်ဝေ
၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင် ၁၉ ဦး ပတ်စ်ပို့ ရပြီ
ဒု သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းနှင့် ဘရာဇီး တရားသူကြီး တွေ့ဆုံ
ဇူလိုင်လ တလအတွင်း ယာဉ် မတော်တဆမှုကြောင့် လူ၂၅၀ ကျော် သေဆုံး
2 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website pps12345 November 10, 2012 - 3:25 pm	၂၀၁၅ ကို နောက်ဆုံးတဲ့လား။ အန်တီစု တက်လာရင် လုပ်အောင်ပေါ့။ သူများကို မကောင်းကြံတဲ့နေရာမှာ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းတွေ ကတော်ပါပေတယ်။
Reply	cityboy November 12, 2012 - 3:05 pm	နိုင်ငံတော်သမတကိုယ်တိုင်က ပြည်သူလူထုကို ဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေချောမွှေ.ပြီး လူနေမူအဆင်.အတန်းမြင်.အောင် ဟန်းဖုံးတွေ ဈေးချိုချို နဲ.ရောင်ပေးဖို. အစိုးရတဖွဲ.လုံးကိုရော ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနကိုပါ ညွှန်ကြားနေတဲ. အချိန်မှာ ၊ စီတီးမတ် ကုန်တိုက်မှာတော. ၀န်ထမ်းအားလုံးကို ၊ ၀န်ထမ်းတွေ ကိုယ်ပိုင် ပိုက်ဆံနဲ. ၀ယ်ထားတဲ. ဟန်းဖုံး တွေကို ၊ အလုပ်ထဲရောက်တာနဲ.
ပိတ်ထားရမယ် ၊ ဆက်သွယ်မူမလုပ်ရဘူး ၊ မိသားစုဘာဖြစ်ဖြစ် ၊ လုံးဝမဆက်ရဘူး၊ ဆက်ရင် အလုပ် ထုတ်ပြစ်မယ်လို. ၊ ဒေါ်ဝင်းဝင်းတင်. က စာထုတ်ချိန်းခြောက် အနိုင်ကျင်.နေပါတယ် ၊၊ တကယ်ဆိုရင် စီတီးမတ် ၀န်ထမ်းတွေရဲ. ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင်.ကို ၊ E.C ( အလုပ်ရှင် – အလုပ်သမား စာချုပ် ) ဘောင်ပြင်ကနေ ပိတ်ပင်နေတာ မျိုးတွေ လုပ်လို.မရပါဘူး ။ စီတီးမတ် ကို အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ. အရေးယူ သင်.ပါတယ် ။ မီဒီယာတွေ ဒီအကြောင်းကို ဖေါ်ထုတ်ရေးသားသင်.ပါတယ် ၊ စီတီးမတ် ၀န်ထမ်းတွေကို ကူညီတောင်းဆိုသင်.ပါတယ် ။
ရွေးကောက်ခံ အနုိုင်ရ မန္တလေး စည်ပင် ကော်မတီဝင်များကို ကန့်ကွက်သူ မရှိသေး
အမေရိကန်သမ္မတလောင်း စကားစစ်ထိုးပွဲ၊ ဟီလာရီ အသာရ
ပုသိမ်ရှိ ပြည်သူပုိုင်နေရာများတွင် အရက်သောက်သူနှင့် လက်နက်ကိုင်ဆောင်သူများကုို အရေးယူ
တိုင်ဖွန်း မီဂီ ထိုင်ဝမ်ကို ၀င်ရောက်
လေပိုင်နက်အနီးကပ်လာသည့် တရုတ်လေယာဉ်များကို ဂျပန်တို့ဟန့်တား
ရေးမြို့ မီးလင်းရေး တရုတ်ချေးငွေ မယူရန် အစိုးရသစ် ဆုံးဖြတ်
အိုမန်၌ လိင်ကျွန်ပြုခံနေရသည့် ထိုင်းအမျိုးသမီး ၂၁ဦးလွတ်မြောက်လာ